Hutano, 01 Ndira 2019
Vanachiremba Vachangopedza Zvidzidzo Voshora Hurongwa hweHurumende hwekuti Vaiswe Pasi peBazi reDzidzo Yepamusorosoro
Vamwe vanachiremba vakapedza zvidzidzo zvavo vari kushoropodza danho rehurumende rekubvisa vanachiremba vachangopedza zvidzidzo kana kuti junior doctors pasi pebazi rezvehutano vachiiswa kubazi rezvedzidzo yepamusoro.
Vana Chiremba Vakuru Voyambira Hurumende Kuti Igadzirise Zvinetswa Zvose
Vana chiremba vakuru vaudza hurumende kuti ikasagadzirisa zvichemo zvose zvavana chiremba vadiki naivowo vachakanda mapadza pasi
Zvita 26, 2018
Zvinhu Zvoramba Zvakaoma Muzvipatara Vana Chiremba Vachiramwa Mabasa
Kuramwa mabasa kwavanachiremba kwakasvika muzuva rechimakumi maviri nematanhatu nemusi weChitatu varwere vakawanda vachidzorwa kumba zvopa kuti vakawanda vaomerwe pazororo rino rekisimusi negoredzva.
Zvita 24, 2018
Health Services Board Inombomisa Basa vanaChiremba Vari Kuramwa Mabasa
Hurumende, kuburikidza neboka reHealth Services Board, yambomisa mabasa vanachiremba pamwe nevanoongorora mifananidzo yemitezo yema X-ray vanodarika mazana mashanu vari pakuramwa mabasa ichivapomera mhosva yekuzvidza mutongo wakaturwa nedare reLabour Court neMugovera.
Zvita 23, 2018
Muzvare Masarira Vanoti Manyepo Kuti Vakabvisa Pamuviri
Mutauriri weMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe, Muzvare Linda Masarira, vanoti vanonzwa kurwadzikana zvikuru nemashoko eruvengo ari kuiswa pamadandemutande zvichitevera kupinda kwavakaita muchipatara vachirwara.
Zvita 22, 2018
Vakafa Munjodzi kuChecheche Vanorangarirwa
Nyaradzo yevanhu gumi nevaviri vakafira kuChecheche kuChipinge kutanga kwemwedzi uno yakaitwa nezuro munzvimbo iyi.
Kundengendeka Kunoparadza Misha kuChipinge
Vanhu vekuChipinge nenzvimbo dzakapoteredza dunhu iri vapindwa nekutya kukuru zvichitevera kundengendeka kwaitika munzvimbo iyi.
Zvita 21, 2018
Mishonga Inoderedza Hukasha hweHIV/AIDS Yonetsa Kuwana kuManicaland
Varorarama neHIV/Aids mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko guru kwazvo rekushaya mishonga inopedza marwadzo anokonzerwa nehutachiona.
Vanhu Vakawanda Vari Kutadza Kutora Mari Dzavo Mumabhangi
Vanhu vakawanda varikutadza kutora mari dzavo mumabhangi vakatarisana nezororo rekisimusi.